Azonao atoro ahy ve ny fomba mahazatra hahazoana ny backlinks PR10 maimaim-poana?
Izany no fanontaniana mahaliana satria ekena fa ny fifandraisana amin'ny fahefana ambony sy valiny PageRank (toy ny backlinks PR5 - PR10) dia azo atao fa tsy mahazo alalana. Eny, mazava ho azy, maro ireo tolotra samy hafa hita hita ao amin'ny tranonkala, miaraka amin'ny karazana rohy samihafa, ary na ny backlinks PR10 aza mora azo hita. Na izany aza, tamin'ny 99 - windows web hosting. Ny tranga 9%, ireo "tolotra" ireo dia tsy misy afa-tsy ny tricks ampiasain'ny mpitsikilo fotsiny mba hahazoana tombony. Tsy mila ny tranonkalanao na ny bilaogy ianao mba hiditra amina sazy mihoam-pitenenana noho ny fanànana rindran-damina mavesa-danja goavam-be, maninona? Tadidio fa rehefa mahomby amin'ny fananganana rohy mahomby ao amin'ny SEO - zava-dehibe foana ny kalitao, fa tsy be loatra. Ny tiako holazaina dia ny hahitako roa backlinks PR10, ohatra avy amin'ny tranonkalan'ny fanabeazana sy ny governemanta na loharano azo itokisana hafa dia tsara kokoa ho an'ny tanjona SEO, fa tsy manala ireo volavolan-dalàna goavam-be tsy dia tsara loatra, ankoatra ny tsy fahatakarana mazava ny tanjona lehibe ary ny tena fiasany. Toy izao ny fomba ahafahanao mahazo rohy matanjaka mahery kokoa ho an'ny SEO, ary na ny backlinks PR 10 aza - mazava ho azy, misy fomba maro mahafinaritra manampy anao amin'izany. Amin'ireo olon-kafa, dia manoro hevitra ny fanandramana Testimonials, Reviews, Fanontana, Lahatsoratra avy amin'ny Guest, ary Infographics aho. Saingy ny zavatra dia ny fitambaran-tranonkala PR10 ihany no azo raisina avy amin'ny loharanom-baovaon'ny governemanta, na ny fampianarana ihany. Tamin'ity taona ity aho dia nahavita nahazo rohy manan-danja manokana avy amin'ireo farany - ary azonao atao koa ny manandrana ny teboka PR8-PR10 avy amin'ny tranokala EDU - na amin'ny fanabeazana malalaka, na fampiasana vatsim-pianarana.
Ny ankamaroan'ny olona, ​​ny foibe fanabeazana rehetra fanta-daza, izay tsy voafetra amin'ny oniversite sy oniversite, dia mitantana ny tranonkala ofisialy, pejy loharanon-tserasera miaraka amin'ny rohy manondro ny loharanom-pitaovana tena ilaina ho an'ny rehetra - samy mpianatra, ary ny mpampianatra azy ireo. Izany no mahatonga ny fiezahana hitazona sy hampidirina amin'ireo loharanom-pejy ho an'ny fanovàna amin'ny ho avy dia mety ho lasa fomba tsara ahazoana ny sarivongana sarobidy sarobidy indrindra nefa tsy mandoa dollar, farafaharatsiny mivantana. Manoro hevitra aho amin'ny fikarakarana fifanakalozan-kevitra malalaka amin'ny alàlan'ny mailaka mba hanolorana vahaolana mahasoa amin'ny orinasanao, ohatra, ny tranonkala, ny fikarohana karazany, sns.Ary mazava ho azy, ho toy ny spam ianao. Na izany na tsy izany, ny fivezivezin'ny 5% -n'ny valin-kafatra manoloana ny rohy dia mamadika ity fomba fitsaboana ity ho tena iray azo ekena, sa tsy izany?
Tsy mila ny fotoananao sy ny ezaka fotsiny ianao, fa ny teti-bola sasantsasany. Midika izany fa ny famoronana sy ny fampiroboroboana ny vatsim-pianarana mba hahazoana an'io teboka mendrika EDU mendrika io ho setrin'izany. Raha toa ka vonona ny hiasa amin'ny vatsim-pianarana ianao dia tena zava-dehibe tokoa, ireto misy hevi-dehibe telo tokony hifindrana amin'ny tanjona:
Mamorona pejy iray hanomezanao ny famaritana ankapobeny momba ny vatsim-pianarana, - amin'ny endrika fangatahana handraisana ireo mpandray anjara mendrika.
Fantaro ireo oniversite na college izay mampiasa fikarohana fikarohana miaraka amin'ny "vatsim-pianarana" nalaina ho teny fototra fototra.
Feno ny mailaka amin'ny mailaka hentitra - ary afaka mivoaka ianao ary manomboka miasa mba hamoronana vatsim-pianarana tena izy miaraka amin'ireo mpandresy sy valisoa tena izy.